Ilhan Cumar oo u jawaabtay Madaxweyne Trump | Allbalcad Online
Home CAALAMKA Ilhan Cumar oo u jawaabtay Madaxweyne Trump
Ilhan Cumar oo u jawaabtay Madaxweyne Trump
Xildhibaan Ilhan Cumar oo ka tirsan koongareeska dalka Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota ayaa fariin jawaab ah ku qortay barteeda Twitter-ka kadib eedeyntii ugu dambeysay ee madaxweyne Donald Trump uu u jeediyay siyaasadeeda iyo nolosheeda gaarka ah.
Qoraalka ay soo dhigtay Twitter-ka, ayaa u muuqataa inay tixraaceyso hadaladiisii ​​ugu dambeeyay ee isu soo baxyadii ololaha ee la qabtay Jimcihii iyo horraantii Sabtida ee uu eedeynta kulul ugu jeediyay.
“Weerarada isdaba jooga ah ee aan kala kulano Trump waa kuwo shirqool ah ee aniga iyo siyaasiyiinta kale ee haweenka ah ee caanka ah maaha kaliya ragga. Tan waxay u horseedayaan hanjabaado isdaba joog ah oo ka dhan ah nolosheena.ayay tiri” Ilhan Cumar.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ilhan Cumar ay dalka Mareykanka, iyada oo qaxooti ah kusoo gashay si sharci darro kana timid Soomaaliya, iyada oo 12 sano jir ah, hadalkaas oo ay Ilhan Cumar ka carootay.
Previous articleHir-Shabeelle & AMISOM oo ka wada hadlay Amniga doorashooyinka
Next articleAkhriso:Liiska Golaha Wasiirada Cusub oo goor dhow lagu dhowaaqay